RIVO RAKOTOVAO : Nampiahatra antsojy momba ireo didy hitsivolana noraisin’ny Filoha
Nataon’ireto farany izay tsy hampandaniana an’ireo lalàna ireo raha toa ka efa nandany tsy misy fanitsiana izany ireo Solombavambahoaka ary efa neken’ny Hcc ihany koa. 13 mars 2020
Notsipahin’i Rivo Rakotovao sy ireo vondrona parlemantera Hvm eo anivon’ny Antenimieran-doholona ny ampahany sasany tamin’ ireo didy hitsivolana noraisin’ny Filoha Andry Rajoelina.
Hita porofo mazava ankehitriny fa lasa sakana amin’ny fampandehanan-draharaham-panjakana ny fijoroan’ny Antenimieran-doholona. Manao izay ho afany hanakanana ny asa fampandrosoana tian’ny fitondram-panjakana ankehitriny hoentina ny ekipan’ny Hvm izay tarihin’ny filohan’ny Antenimieran-doholona, Rivo Rakotovao.
Ity farany izay fantatra fa manome hevitra an’ireo vondrona parlemantera Hvm eo anivon’ny lapan’Anosikely ny tsy hampandaniana an’ireo didy hitsivolana izay noraisin’ny Filoha Andry Rajoelina.
Ny talata lasa teo no nandalo teny anivon’ity andrim-panjakana ity ireo didy hitsivolana izay efa avy nolaniana tsy nisy fanitsiana teny Tsimbazaza. Tao anatin’ny adihevitra dia efa niseho lany ny tsy fitovian-kevitra teo amin’ireo samy loholona. Raha ny tokony ho izy dia tsy tokony handalo adihevitra be intsony ireto didy hitsivolana ireo satria efa nankato izany ny Fitsarana Avo momban’ny Lalàmpanorenana. Noho ny filam-boatsiarin’i Rivo Rakotovao anefa dia mbola nitaky fotoana maharitra handinihana sy hanaovana adihevitra mahakasika ny votoatin-kevitra voarakitra ao anatin’ireo didy hitsivolana ireto ny tenany. Nisy nandà izany ny sasany tamin’ireo loholona ka nivoaka ny efitrano fivoriana rehefa raikitra ny adihevitra.
Naharitra tao anatin’ny adim-pamantaranandro maro ny adihevitra. Notsipahin’ny ekipan’ny Hvm niaraka tamin’ireo loholona manohitra ny fampandrosoana ny firenena ilay volavolan-dalàna laharana faha-001/202 tamin’ny 26 febroary 2020 izay ahitana didy hitsivolana miisa telo. Tafiditra ao anatin’izany ny volavolan-dalàna laharana faha 2019-002 tamin’ny 15 mey 2019 mahakasika ny fahefana ankapobeny amin’ny fifidianana sy ny fitsapan-kevi-bahoaka. Hita ao anatin’io ihany koa ny lalàna 2019-009 tamin’ny 15 jolay izay manova sy manampy andinin-dalàna vitsivitsy momba ny lalàna mifehy ny harena an-kibon’ny tany ary farany dia ny lalàna laharana 2019-006 tamin’ny 28 mey 2019 izay mitazona ny lalàna mifehy sy fampandehanana ny Antenimieran-daholona.
Fitsipahana efa nomanina
Araka izany dia saika tsy nisy nankatoavin’ireo loholona, indrindra fa ireo avy amin’ny antoko Hvm ny didy hitsivolana izay noraisin’ny Filoham-pirenena. Miseho masoandro tanteraka ny politika maloton’izy ireo izay mifototra amin’ny fanoherana bontolo fotsiny ihany fa tsy mijery izay tombontsoa iombonana ho an’ny firenena. Heverina ihany koa fa misy tombontsoan’izy ireo voatohintohina ao anatin’ireo didy hitsivolana ireto ka antony izany tsy naneken’izy ireo ny hampandaniana izany. Araka ny vaovao voaray dia nisy mihitsy aza ny taratasy nalefany teo anivon’ny birao maharitry ny antenimieran-daholona mba hitsipahana an’ireto volavolan-dalàna ireto.
Izay midika fa efa nomanina ny fitsipahana ireto didy hitsivolana ireto. Fantatra fa ny 24 tamin’ireo loholona 42 tonga nivory no nitsipaka ny handaniana izany, 12 kosa ireo nanaiky ary tsy naneho hevitra ny iray. Tonga nisolo tena ny fitondram-panjakana teny amin’ny Antenimieran-doholona ny Minisitry ny harena an-kibon’ny tany sy loharanon-karena stratejika. Ity farany izay nilaza fa manaja izay tapaky ny maro an’isa amin’ny maha tany mpandala ny demokrasia azy ny fitondrana.